Shina: Fanaovana Tsindry Hazo Lena Olona Nitatitra Fisiana Fandikan-dalàna Iray Mba Hilaza Ny Loharanom-baovaony · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Febroary 2013 4:09 GMT
Manao tsindry hazolena amin'i Zhu Ruifeng ny mpitandro ny filaminana ao Chongqing , ilay vavolombelon'ny fisian'ilay horonan-tsary mirakitra ilay tantara ratsinà resaka firaisana ara-nofo mba honolorany ny orizinalin'ireo horonan-tsary miisa 7 ireo mahavoarohirohy manampahefana miisa iraika ambinin'ny folo ao amin'ny governemanta. Milaza ny mpitandro ny filaminana fa ilain'izy ireo ny orizinaly mba hahafahan'izy ireo manatanteraka fikarohana mahaleotena mifandraika amin'ireo horonantsary ireo; fa nivaky i Zhu [zh] fa ny sasany amin'ireo horonantsary ireo dia nomenà mpanome vaovao tsy nitonona anarana ho azy an-tànana, io olona io no namoaka ny vaovao avy ao amin'ny biraon'ny mpitandro ny filaminana ao Chongqing. Mino izy fa ny tanjon'io “fikarohana” atao io dia ny mba hahafantarana ny fototra niaingan'izany.
Nanao tatitra tao amin'ny Sina Weibo i Zhu Ruifeng ny 27 Janoary 2013 mikasika ny fitsidihana tsy nampoizina nataon'ny mpitandro filaminana ao Chongqing azy tao an-tranony. Nanomboka tamin'izay dia nofafàna ireo fampidirana tao amin'ny bilaogin'i Zhu sasany, hitantsika eto ambany ny dika mitovin'ny iray amin'ireo bilaogy kiritika an'i Zhu tao amin'ny kdnet [zh]:
Sarin'i Zhu Ruifeng tao amin'ny Sina Weibo.
[Daty sy ora: 2013.1.27 18:56] Handeha ho any amin'ny biraon'ny mpitandro ny filaminana any Deshengmen aho. Mandondona ao am-baravarako ao i Sun Xin manam-pahefan'ny polisin'ny distrika ary tadiaviny ho entiny manaraka azy aho. Mba mitandrina azafady e!
[Ora: 19:10] Mbola ato an-tranoko aho. Polisy 5 no mbola mijoro ao ivelan'ny varavarako ao. Efa niteny aho hoe izaho irery no handeha ho any amin'ny biraon'ny polisy. [Hoy aho tamin'izy ireo] Tsy tokony hobahananareo toy izao ny varavarako. Tena polisy avy ao Chongqing marina ianareo. Faniriako ny hiditra am-ponja noho izaho nitoroka an'i Lei Zhengfu ary efa nivonona tsara tamin'izany aho. Mponina eto Beijing aho, resaho i Zhao Yang , lehiben'ny polisy avy ao amin'ny biraon'i Deshengmen mba hifandray amiko dia hiaraka aminareo aho. Ankoatr'izay, tsy hosokafako mihitsy ny varavarako na mafy tahaka ny inona aza ny fandondonanareo ao. Mba avereno bitsihana anie ity azafady e.
[Ora: 21:14] Niatrika ny polisy aho na dia efa naharitra elaela ihany aza izany. Niteny azy ireo aho: Efa maizina ny andro izao ka aleo hiandry ny andro mazava izany. Hoy aho tamin'izy ireo hoe ho entiko any Deshengmen ny mpisolo vavako rahampitso maraina amin'ny 9:30. Nanaiky ihany izy ireo ny farany, fa na izany aza dia mbola nasian'izy ireo olona ihany niandry teo ivelan'ny varavarako. Misaotra anareo ry namako ao amin'ny bilaogy kiritika tamin'ny fanohananareo ahy. Rehefa misy mitondra any amin'ny polisy any Chongqing aho rahampitso, dia maniry aho ny mbola hanohananareo ahy ary miangavy anareo aho mba hiaro ireo mpitatitra ny fisian'ny fandikan-dalàna rehetra.
Ny andro manaraka io, nanao fanambaràna ampahibemaso [zh] izy, ka nanondro mpitarika maromaro to-teny mpitondra ny hevi-bahoaka ho mpifandray aminy, ho mpitondra teny ary hisolo tena azy araka ny lalàna. Amin'ny faran'ilay fanambaràny izy, dia amafisiny fa:
Raha vao voasambotry ny mpitandro ny filaminana ao Chongqing aho ka very miaraka amin'izay ny fahafahako manokana, dia tsy hanoka-bava mihitsy aho hanoherana ireo fihetsika tsy manara-dalana ataon'ny polisy ao Chongqing. Izay sonia rehetra nataoko tany amin'ny biraon'ny polisy dia tsy nataoko an-tsitrapo fa noho ny fampijaliana nataon'ny polisy. Raha vao very ny fahalalahako, ny fanapahan-kevitra rehetra raisin'ny fianakaviako, na koa raisiko voasoratra tamin'ny rà mba hanovàna ireo olona notondroiko hiaro ary araka ny lalàna dia tsy hanan-kery. Tsy handa ny fanendrena olona hiaro ahy araka ny lalàna mihitsy aho.
Raha miditra ao amin'ilay vohikala antsoina hoe “Fanaraha-maso an-tserasera atao amin'ny vahoaka ” [zh] isika dia mahita fa anisan'ireo mpanao gazety vitsy an'isa izay manana fahasahiana i Zhu eo amin'ny fanaovana tatitra kolikoly. Ilay horonantsary misy ilay tantara ratsnà firaisana ara-nofo nahamenatra izay navoakany tamin'ny volana Novambra 2012 dia efa nahatratrarana manampahefana 10 mpanao kolikoly tao Chongqing. Kanefa, nanambara i Zhu fa mbola maro ireo manamboninahitra ambony ao amin'ny governemanta no tazana ao anatin'ireo horonantsary eo am-pelatanany.
Olona 10 manampahefana tao amin'ny governemanta no voaraoka tao Chongqing noho izy ireo tafiditra tamin'ilay resaka firaisana ara-nofo mahamenatra. Sary nalaina tao amin'ny jdway.com. Tsy azo ampiasaina ho fitadiavam-bola.
Nohadihadian'ireo mpitoraka bilaogy avy amin'ny Sohu izy tamin'ny 29 Janoary ary tamin'ny alalan'ny aterineto no nanaovana izany, tamin'izany indrindra no nilazany ny pitsopitsony rehetra mikasika ilay fanadihadiana nataon'ny polisy azy naharitra ora 3 be izao:
Fony nijoro tao ivelan'ny tranoko izy ireo, dia tsy natahotra mihitsy aho. Fahiny, efa nanana traikefa tamin'ny fanarahamaso manamboninahitra tao amin'ny governemanta miisa 38 aho ary efa nahazatra ahy ny fanindrinindriana ataon'izy ireo. Tamin'ity indray mitoraka ity, dia nankany an-tranoko izy ireo (izay hita ao anaty faritra eo ambany fanaraha-mason'ny foloalindahy), tsy nahazo alalana avy amin'ny departemanta miara-miasa amin'ny tafi-panafahana (PLA) akory ny polisy avy ao Chongqing. Tezitra mafy ny lehiben'ny PLA ary nilaza izy hoe: ny andraikitry ny PLA dia ny miaro ny firenena, raha toa ka tsy mahavita miaro ny manam-boninahitsika isika, dia mbola afaka antsoina hoe foloalindahy ihany ve?
Tsy manaiky io fangatahan'izy ireo [polisy avy ao Chongqing] io aho. Ny tanjon'izy ireo dia ny hamantarana ny loharanom-baovaoko. Tian'izy ireo ho fantatra mihitsy [amin'ny alalan'ny dian-tànana] ny tena anaran'ilay olona nanome ahy ny vaovao amin'ny fakàn'izy ireo ny porofo. Nilaza izy ireo fa ilainy amin'ny fikarohana ataony mikasika ny fandrahonana mihatra amin'i Zhao Hongxia [ilay vehivavy tazana tao anaty horonantsary] sy ny maro hafa io porofo io . Tsy mino izany [fikarohana] mikasika fandrahonana izany aho. Efa nanolotra porofo mikasika ireo olona manan-kaja miisa 11 ao amin'ny governemanta aho, ahitana an'i Lei Zhengfu [sekreteran'i CCP taloha tao Chongqin , distrikan'i Beipei] nanaiky kolikoly tamin'ny endrika firaisana ara-nofo. Namaly izany ny mpitandro filaminana ao Chongqing ka nanao hoe: tsy andraikitray izany. Ny asanay dia ny mamaha ny olana mikasika fandrahonana efa tsara homana nataon'i Xiao Ye [ilay mpanera trano izay nanolotra vehivavy ho an'ireo manamboninahitra ao amin'ny governemanta mba hanatanterahany ny filàny ara-nofo] sy ny namany.
Nandritra izany fotoana izany, dia nosamborina [zh] i Xiao Ye sy ny mpandraharaha mpiara-miasa aminy Xu Sheqing . Tamin'ny taona 2009, natolotr'i Xiao ny polisy tao Chongqing ireo horonantsary rehetra manendrikendrika ireo manampahefana mandray tsolotra, nefa najanona tsy narahana fanadihadiana ilay raharaha.
Mba hiarovana ilay olona nitatitra fisiana fandikan-dalàna, dia tsy nanaiky [zh] nanome ireo horonantsary ireo i Zhu ary nilaza izy fa ho avoakany ireo horonantsary dimy ahitana firaisana ara-nofo ireo raha vao voamariny ny fisiany. Nilaza ny fomba fijeriny ihany koa ny feon-gazety ao Sina antsoina hoe People’s Daily [zh], izay nitatitra ny nolazain'ny manam-pahaizana iray amin'ny lafiny lalàna manao hoe tsy manana alalana hangataka “porofo” any amin'i Zhu ny polisy.
[Nandray anjara tamin'ny fanoratana ity lahatsoratra ity koa i Owen]